तिहार सकिएसँगै घट्यो तरकारीको भाउ, कसको कति ? - News from Nepal
तिहार सकिएसँगै घट्यो तरकारीको भाउ, कसको कति ?
काठमाडौं– दैनिक उपभोग गरिने तरकारीको मूल्य अन्य दिनको तुलनामा चाडपर्वका समयमा दोब्बर खपत हुने गरेको पाइन्छ ।
खपत बढेसँगै व्यापारीले चर्को मूल्यमा तरकारी विक्री वितरण गर्दछन् र चाडपर्व सकिएसँगै तरकारीको मूल्य सस्तो हुने गर्दछ ।
केही दिनअघिदेखि लगातार वृद्धि भइरहेको तरकारीको मूल्य बुधवार घटेको छ ।
काठमाडौंको मुख्य थोक बजार कालीमाटीमा आज बुधवार तरकारीको भाउ सस्तो भएको छ । जसमा हरियो धनियाँ सस्तो भएको छ ।
मंगलवार अर्थात् भाइटीकाको दिन हरियो धनियाँ किलोको ६ सय १५ रुपैयाँ खुद्रा मुल्य तोकिएको थियो । बुधवार किलोमा १ सय ७० रुपैयाँ भाउ घटेर ४ सय ४५ रुपैयाँ खुद्रा मुल्य तोकिएको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
मंगलवारको तुलनामा बुधवार गान्टे मुलाको भाउ किलोमा ५० रुपैयाँले घटेर १ सय ५ रुपैयाँ खुद्रा मुल्य तोकिएको छ ।
त्यस्तै पाते च्याऊ १ सय ९० रुपैयाँ, डल्ले च्याऊ किलोको ५ सय १५ रुपैयाँ, मूला किलोको ५५ रुपैयाँ, गाजर किलोको १ सय ६५ रुपैयाँ खुद्रा मूल्य तोकिएको छ ।